Inoita sei kuti Windows 11 iite sei kugoverwa kweLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Inoita sei kuti Windows 11 iite sei kugoverwa kweLinux?
Iyo skrini iri pamusoro peiyi positi iri kubva kune yangu komputa. Yakagadzirwa nguva pfupi yapfuura mushure mekunge Microsoft yazivisa kuburitswa kuri kuuya kweWindows 11. Uchishandisa tool Microsoft yakadaidzwa Windows PC Hutano Ongorora Ini ipapo ndakagamuchira iwo meseji yekuti PC yangu kubva 2012 haizokwanisi kumhanyisa vhezheni itsva, achiperekedzwa nekuseka kunozvidzika. (Kuseka kwaive kufunga kwangu)
Rimwe rerime uye rimwe rejecha. Ndakataura chokwadi pandakati pano y pano iyo pfungwa yekuti Windows yakavakirwa paLinux kernel yaive sheer bullshit. Asi, ini ndaive ndakanganisa pandakatenda zvataurwa naMicrosoft zvekuti paizove pasina Windows 11, kunyangwe hazvo izvo zvikaita yangu 11 zvakanaka yekushandisa Linux zvave kuitika kupfuura nakare kose.
1 Inoita sei kuti Windows 11 iite sei kugoverwa kweLinux?
1.1 Nei uchichinjira kuLinux?
Kana Windows Vista yaonekwa muna 2007, kugoverwa kweLinux kwanga kusati kwakura zvakakwana kuti vatore mukana wehasha dzemushandisi. nekuda kwematambudziko avaisangana nawo. Zvakare Microsoft yakapa imwe nzira yakasimba mune yakatosimbiswa Windows XP. Nhasi, zvisinei mamiriro acho akasiyana.
Pakabuda Vista, mazhinji mawebhusaiti akagadziridzwa kuInternet Explorer. Nhasi mazhinji emawebhusaiti akagadziridzwa kuGoogle Chrome. Kunze kweSafari, ese makuru Chrome-based mabhurawuza ane Linux vhezheni.
Makore gumi nemana apfuura, iyo nhamba yehunyanzvi-mhando mitambo yeLinux yaive isipo isipo. Muna 14 nhamba iyi iri kuramba ichikura, iyo inofanira kuwedzerwa matekinoroji akaita seProton inokutendera kuti utumidze mazita eWindows. Uye, iyo indasitiri maitiro ndeyeye makore emitambo mapuratifomu ayo anoita iyo yekushandisa sisitimu isingakoshe.
Hardware inotsigirwa muLinux apo Windows Vista yakabuda yanga isina kuenzana. Mimwe mhedzisiro senge HP maprinta kana maMusek scanner akavandudza madhiraivha. Mune zvimwe zviitiko waifanirwa kuanyora kana kuchengeta Windows pachikamu chekuti waida kuprinta chimwe chinhu kana kushandisa webcam. Nhasi zvinenge zvisingaite kuwana komputa isingashande neLinux. Uye, ese maviri eIntel uye AMD makadhi evhidhiyo ane akanaka emuno madhiraivha.
Nei uchichinjira kuLinux?
Windows 10 ine angangoita makore mana ekutsigira uyeKunze kwekunge dambudziko rekushomeka kwazvino chip richiwedzera, vashandisi vasina macomputer anoenderana vanochinjisa michina panguva iyoyo.
Izvo zvinodiwa zvehardware ndeizvi:
64-bit processor ine maviri kana anopfuura macores.
4 GB yekurangarira mashoma.
64 GB yediski nzvimbo.
Hardware ine UEFI rutsigiro uye Yakachengeteka Boot rutsigiro.
Iva neTPM chip mukombuta yako. Iyo TPM chip ndeye yakachengeteka crypto processor iyo inokubatsira iwe nezviito, sekugadzira nekuchengetedza macryptographic makiyi, pamwe nekudzora mashandisiro awo.
Graphics kadhi ine rutsigiro rwe DirectX 12 kana gare gare, uye iyo WDDM 2.0 mutyairi.
Angangoita 9-inch diagonal skrini, iine 720p yakakwira tsananguro, uye 8-bit paruvara mugero.
Pakarepo, ese 32-bit makomputa anosara kunze. Uye, ini handizive kuti mangani eaya akatengeswa kubva muna 2016 achave neanofara TPM chip.
Mutengo mune ino kesi haisi chinhu. Iwe unozokwanisa kugadzirisa zvemahara kubva Windows 10 kana kurodha pasi sechikamu cheInsider chirongwa. Asi, kunze kwekunge iwe uchifarira zvemitambo, pane zvinhu zviviri chete zvinotonhorera zvinogona kuitiswa paLinux pasina dambudziko.
Chekutanga kusangana kwechitoro cheMicrosoft neAmazon Android application chitoro. Mune mamwe mazwi, iwe uchave unokwanisa kushandisa Android application paWindows. Hazvifanirwe kunge zvakanyanyooma kuita zvakafanana neLinux uye F-Droid kugoverwa.
Yechipiri (Ndeipi iri pasi pechiuno kubva kuApple neGoogle) ndeyekuti vanogadzira vanoburitsa mashandisiro avo muchitoro cheMicrosoft vachakwanisa kusarudza chikuva chekubhadhara. Chaizvoizvo, chitoro cheSpap chinotendera kusanganisira sarudzo yekubhadhara iyo Canonical isingapindire, asi chingave chisina kunaka kuve neApp Store yepasirese ine mahara uye akabhadharwa mafomu umo munhu anogona zvakare kupa muzana kuvhura sosi mapurojekiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Inoita sei kuti Windows 11 iite sei kugoverwa kweLinux?
Ini ndinobvuma zvachose kuti vanhu vazhinji vanofanirwa kushandisa Linux yakawanda. Asi kune avo vedu vanoshandisa zvirongwa zveAdobe zuva nezuva, semuenzaniso, hazvisati zvave kukwanisa kuenda kuLinux. Uye sezvo isu tisingatamire kuLinux adobe haina kana chainoita, saka iri denderedzwa rekusapera nyore.
Adobe? yechii? kuona ma pdf?
haudi mune linux, kune mazhinji emahara mapurogiramu acho
Ndinokupindura here. Photoshop yakakosha kune vakawanda uye Gimp yekuvandudza zvimwe uye kufanana kunoramba kuchingove nemipimo isina kujairika.
Chimwe chinhu chakapusa uye kuti kweanopfuura makore gumi iwe aunogona kuita muPhotohop kuwedzera muganhu kuchinyorwa chimwe chinhu chiri muGimp chisingakwanisike pasina kushandura iwo mavara kuita mufananidzo, zvichikutadzisa kubva mberi kuenderera mberi nekugadzirisa iwo mavara kuitira ramangwana shanduko. Zvinotemesa moyo.
ryan quezada akadaro
nzombe, usazvikwanise. Ini ndakachinjira kuLinux zvachose, ini ndiri graphic dhizaini uye ini ndinoita muGIMP uye Inkscape zvakafanana nezvandakamboita muAdobe suite, ndichingoshandisa imwe nzira dzakasiyana, hongu Iyi. Asi kana uchinge wajaira, haumire kutenderera uchitenderera ne linux.
Pindura Ryan Quezada
Ndinogona here kuva nelinux uye windows 11 panguva imwechete nebhuti rakachengeteka?
Pindura kune perdiboot
Hongu, kugoverwa kweLinux kunotsigirwa
Ndisati ndaenda kuLinux, ini ndinokurudzira kutarisa kana iyo TPM yakaremara muBIOS.
Ini ndinofunga kuti, semushandisi weLinux, ndiri kuona kuti mukana wekumhanyisa maapplication eApple watambiswa sei, nekuti pasina kuenda kumberi muWindows pane zviri nyore "emulators" zveaya maapplication anoshanda chaizvo, zvakanyanya izvo zvinofungidzirwa kuti ndezvizvarwa. kuuraya, uye mu linux chii chatinacho? maviri kana matatu (anbox, genymotion uye androidx86) zvakanyanya ane maitiro akaipa kwazvo kana iwe unofanirwa kumhanya muvm
Tor 0.4.6.5 inouya nerutsigiro rwechitatu vhezheni yeanion masevhisi uye inotaura zvakanaka kune apfuura